Dagaal dhex maray Ciidanka Barre Hiirale & Markab dagaal oo Kenya - iftineducation.com
Dagaal dhex maray Ciidanka Barre Hiirale & Markab dagaal oo Kenya
aadan21 / December 11, 2014
iftineducation.com – Dagaal mudo kooban socday ayaa dhex maray Ciidamada Col. Barre Hiiraale taabacsan iyo ciidamo saarnaa Markab dagaal oo Dowladda Kenya leedahay, kaasoo kusoo dhowaaday deegaanka Goobweyn, oo 11km u jirta Magaalada Kismaayo.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in dagaalkaan uu sababay dhimashada Xoolo ay dhaqanayeen dad shacab ah, oo ku nool halka uu dagaalkaan ka dhacay oo ah xeebta deegaanka Sabca Ashraaf oo ka tirsan deegaanka Goobweyn, wuxuuna socday iska horimaadku muddo hal saac oo xiriir ah.
090327-N-5242D-135C/qaadir Maxamed oo ka tirsan Saraakiisha Ciidamada Barre Hiiraale, ayaa waxa uu xaqiijiyay in iska horimaad ay la galeen ciidan la socday markab nooca dagaalka ah, balse ma sheegin cidda ay yihiin.
C/qaadir, ayaa u sheegay laanta afka Soomaaliga ee VOA in markabka uu dib ugu laabtay goobtii uu ka yimid, isla-markaana aanu hadda joogin deegaanka xeebaha deegaanka Goobweyn.
Wuxuu mas´uulkaan ka tirsan ciidamada Barre Hiiraale uu sheegay in dhinacooda wax khasaare ah soo gaarin, balse aysan ka war hayn khasaaraha gaaray markabka.Kenyan Navy 2Warar madax banaan, ayaa waxay sheegayaan in markabku ay la socdeen Ciidamada Badda Kenya, balse lama garanaayo ujeedada ka dambeysa in markabku ku soo dhawaado xeebaha Jubbooyinka.
Sawirro: Axmed Madoobe oo codsi hor dhigay Dowladda Ethiopia
Wafdi ka socda Dowladda oo gaaray Dhuusamareeb: Sawirro